Ya mere, ihe bụ a na-ere ahịa na-eme?
Mgbe ị na-Alụlụụ Atiya ka a dum, ha na-na na-aga nke ọma nyere nicotine na ekpomeekpo, na CBD awade a ike ọhụrụ nje ọgụ. Ọ bụ ihe na-n'ji bụ ọchịchọ ịmata banyere, na mgbe ha na-na-na na na-agbalị ya, ha na-na na yiri ka na-aghọta na ọ na-enye a ọnụ ọgụgụ nke uru. Nke ahụ bụ ezi onye ọ bụla.
"Amaara m ọtụtụ ndị na-vape na chọrọ na-agbalị CBD .. ọ bụ na-amaghị ama na-akpata, na-ekwu Anthony Bautista, CEO nke Dị Ọcha CBD gbazee. "Echere m na CBD bụ ebe a na-anọ maka a nnọọ andikabuana. Ozugbo ị na-amalite na-enyere ndị mmadụ na ha ọrịa ha, ma ọ bụ na-ehi ụra ma ọ bụ nchegbu, ha na-aghọ ahịa maka ndụ.
CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri 1000mg CBD 10ml vape mmanụ
CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri 500mg CBD 10ml vape mmanụ
CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri 300mg CBD 10ml vape mmanụ
CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri-300mg CBD 30ml vape mmanụ
CANNAPRESSO CBD E mmiri mmiri-100mg CBD 30ml vape mmanụ